Ukuqothuka kwenkampani yeCannabis | Ummeli WeCannabis | UTom Howard
Isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-20 manje selokhu iCalifornia yavumela ukusetshenziswa nokuthengiswa kwensangu yezokwelapha. Eminyakeni engama-20, ezinye izifundazwe ezingama-30 ziye zangena kwi-bandwagon, futhi ukusetshenziswa kwensangu yezokwelapha sekuyamukelwa jikelele.
Ukuze unakekele ukwanda kwesidingo, kuye kwangeniswa amabhizinisi amaningi insangu ezingxenyeni ezahlukene zezwe. Ngenxa yalokhu, ibhizinisi lebhodwe likhule kakhulu eminyakeni embalwa edlule, futhi imikhiqizo ehambisana nayo, kufaka phakathi amasheya, iye yabamba iqhaza labatshalizimali emhlabeni wonke.
Ngenkathi imboni yensangu inenzuzo enkulu, amabhizinisi ambalwa ahlulekile ngenxa yezizathu ezahlukahlukene ezedlule. Kepha kwenzekani lapho amabhizinisi insangu engaphumeleli? Ngabe banenketho yokufaka ifayili lokuqothuka, njenganoma yiliphi elinye ibhizinisi?
Ngezansi sibheka ukuqothuka kwe-cannabis, kanye nezinketho ezitholakala kubatshalizimali abamabhizinisi abo ahlulekayo ukwephula noma aphumelele.
Enye yezinketho eziningi ezitholakalayo zamabhizinisi ehluleka ukufaka ukuvikelwa kokuqothuka. Ngokufaka imali ngokuqothuka, la mabhizinisi awakwazi nje ukuqeda isikweletu, kodwa futhi kuba lula ngawo ukuthi ahlele kabusha ngengcindezi encane yezimali. Ngeshwa, le ndlela ayitholakali kumabhizinisi embonini yensangu.
Njengamanje, amabhizinisi insangu awakufanelekeli ukuvikeleka kokuqothuka kwenhlangano. Lokhu kusebenza ngisho nasezifundeni lapho imbiza isemthethweni. Kuvunyelwana ngokuthi inqobo nje uma insangu ihlala iyinto elawulwa, amabhizinisi kule mboni awavikelwe umbuso uma kukhulunywa ngokuqothuka.
Lokhu kungenxa yokuthi wonke amacala okuqothuka alalelwa enkantolo yezimali. Kodwa-ke, ngaphansi koMthetho Wokulawulwa Kwezinto Ezilawulwayo, insangu isabhekwa njengohlobo lwe-I drug, okusho ukuthi akukho emthethweni ukuyikhulisa, ukuyisabalalisa noma ukuyinikeza.
Njengoba umthetho wobumbano ulawula ukuqothuka, akunakwenzeka ukuba iTrust Bankcycy Trustee iphathe noma ilawule izimpahla ezithathwa njengezingekho emthethweni ngaphandle kokwephula umthetho.
Ngenkathi lokhu kubeka abatshalizimali ebhizinisini lensangu engozini, lonke ithemba alilahleki. Kunezinye izindlela eziningi ezitholakalayo zebhizinisi le-cannabis ezingahambi njengoba kulindeleke. Kubandakanya:
Le ndlela ifaka ukuguqulwa kwezimpahla zebhizinisi zibe yimali, engasetshenziswa ukulungisa izikweletu ngabakweletwayo. I-Liquidation kungaba yokuthanda noma yokuphoqelela, futhi izinyathelo ezibandakanyeka kulezi zinhlobo zalezo zindlela zokuhlala zihlukile.
Endabeni yokumiswa okuphoqelekile, inkantolo iyabandakanyeka. Ababolekisi bacela inkantolo ukuthi imise inkampani. Lokhu kwenzeka kakhulu lapho abakweletwayo bekholelwa ukuthi inkampani okukhulunywa ngayo ayikwazi ukukhokha izikweletu zayo.
Ukuze umuntu afake insolvency ngokuzithandela, inkantolo ayithinteki. Yabaqondisi benkampani abaqala inqubo yokumiswa kwemali lapho kuvela ukuthi inkampani izoba nesikhathi esinzima ukukhokha izikweletu zayo. Ezimweni eziningi, inkampani iyakwazi ukukhokha zonke izikweletu ngemuva kokupheliswa kwemali.
Lapho nje ukugcwaliswa kukhiqizwe, inkampani izoncibilika. Isikhathi sokuvalwa kwemali siyehluka ngokuya ngobunzima bebhizinisi, phakathi kwezinye izinto. Inqubo ivame ukubandakanya ukubandakanyeka kukachwepheshe wokuhluleka ukukhokha izikweletu, omsebenzi wakhe ophambili ukunikeza umhlahlandlela wokuthi yiziphi izinto okufanele zenziwe ezigabeni ezahlukahlukene zenqubo yokumiswa kwemali.
2. Ukutholwa kabusha
Enye inketho etholakalayo kulabo abakwibhizinisi lembiza ukutholwa. Ukwemukelwa inqubo inqubo lapho abakweletwayo baba ngabanikazi bempahla yomkweleti.
Umuntu othembekile osebhizinisini uqokelwa ukusebenza njengemukeli futhi athengise imikhiqizo yensangu ngaphansi kwemvume yokwahlulela. Le nqubo ivame ukwenzeka ngemuva kokuthi abakweletwayo nababolekisi bevumile ngenqubo enhle abazoyenza lapho bebhekene nokuqothuka
Noma ukutholwa akuvamile, kungasiza abakweletayo ukuba baphume ezikweletini zezezimali ngokushesha. Ngenkathi abakweletwayo belahlekelwa yizindawo zabo, inqubo leyo yenza kube lula ukuthi abakweletwayo bakwazi ukuthola imali yabo.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi owemukelayo wenza ngokwenzuzo yombolekisi. Lokhu akusho ukuthi umnikazi webhizinisi ngeke akwazi ukukunikeza umhlahlandlela, ikakhulukazi ezimeni ezikhethekile njengokuqhuba ibhizinisi lebhodwe. Kunezindlela eziningi umnikazi webhizinisi angasetshenziswa ngazo ukukhulisa inani lempahla futhi aqinisekise ukuthi bonke ababolekisi banelisekile ekugcineni kwenqubo.
Izingozi zebhizinisi leMalijuana
Ukuthi amabhizinisi kule mboni awakufanelekeli ukufaka amafayili okubumbana kusho ukuthi ababolekisi bayakuqaphela ukuqhubekisela phambili isikweletu kubo. Izikhungo ezibolekayo ziyazi kahle ukuthi uma kwenzeka ibhizinisi liqhubeka, ithuba lokubuyiselwa kwemali lincane lincane.
Eqinisweni, osomabhizinisi abaphumelela ukuthola imali mboleko kwizikhungo ezibolekisayo bavame ukukhokhiswa amanani aphezulu enzalo uma beqhathaniswa namanye amabhizinisi.
Imboni yensangu nayo ibhekene nezinye izingozi okufanele ukuthi abatshalizimali bazazi. Imithetho elawula ukuthengiswa kwensangu iqhubeka ivela, futhi abatshalizimali kufanele bahambisane nalezi zinguquko. Uma kwenzeka kwephulwa umthetho wokwenza ibhizinisi, kulula kakhulu kubo ukuthi balahlekelwe amalayisense abo e-cannabis.
Njengoba kunjalo, kubalulekile ukuthi amabhizinisi insangu isebenzisane nabameli abanolwazi abanganikeza izeluleko zomthetho lapho futhi lapho kudingeka khona.
Izindaba ezimnandi, nokho, ukuthi imboni yokhula iyakhula, okusho ukuthi labo nje abangena embonini yamathuba amaningi bangaphumelela futhi baphindaphindeke ukutshala imali yabo ngesikhathi esifushane.
Siyinkampani yezomthetho esePeoria, e-Illinois. Igama lami ngingu-Attorney uThomas Howard. Ngigxile embonini yezindaba ze-cannabis yezomthetho futhi ngisebenza nethimba labameli abanekhono ukunikeza izeluleko zomthetho kubatshalizimali ebhizinisini lensangu.
Uma ibhizinisi lakho le-cannabis libhekene nokubhidlika kwezezimali okunokwenzeka, thintana nathi. Ngeke nje sikunikeze izeluleko kodwa futhi sizoxoxisana nabakweletayo ukuze siqinisekise ukuthi bobabili abathintekayo bathatha izinyathelo ezinhle kakhulu.
Siyaqonda ukuthi kungaba nzima kanjani ukubakweleta ababakweletayo, ikakhulukazi uma unezindlela ezimbalwa zokugcina ibhizinisi lakho. Siyazi ukuthi yize izinto zingahle zibonakale njengezinkimbinkimbi, ihlala ikhona indlela yokuphuma. Sinethimba lochwepheshe abazodlula izincwadi zakho futhi bakusize wenze isinqumo esinolwazi.
Sizinikele ekwenzeni kube lula kuwe ukwenza ibhizinisi nokusombulula izinselelo eziningi embonini yensangu. Thintana nomthetho we-Illinois wethu wezomthetho, futhi sizokunikeza izeluleko ezibalulekile zokuthi ungazikhipha kanjani ezinkingeni zezezimali ngokucindezela okuncane okuvela kwabakweletayo.